Iyini umphumela womphakathi?
Sonke siphila ngaphakathi kohlaka lomphakathi. Kungaba mkhulu, njengamazwe omhlaba noma ngaphakathi kombuso, futhi mhlawumbe okungelona lukhulu kakhulu: umndeni noma isiyingi somngane wabangane.
Ibhizinisi lanamuhla libona umgomo walo omkhulu wokukhulisa inzuzo futhi, ngenxa yalokho, ukwanda kwezindleko zezimali. Futhi abakhiqizi, abaxhumanisi nabathengisi banamathele kumthetho olula: bathenga ngentengo encane, abathengiswa ngokuphezulu, beka umehluko ephaketheni labo. Lona uhlobo lomthelela wezomnotho kusuka ekushintsheni komnotho wemakethe kanye nendlela yokubamba iqhaza ekulawuleni nasekunikezeni izinsiza.
Umthelela womnotho wemakethe emphakathini
Imiphumela yomnotho wemakethe ihlukahluka esikhathini esifushane nesikhathi eside. AmaFemu ancintisana phakathi kwabo, alwela umthengi, ukuthuthukisa umkhiqizo kanye nenqubomgomo yokukhangisa, ukukhiqiza umphumela omuhle womphakathi, ukuheha abasebenzi abengeziwe. Imizamo yabo iphoqelela ukuthuthukiswa kwengqalasizinda esifundeni, nokwenza umphakathi ube ngamasu okuncintisana angakhohlisi.
Amabhizinisi amakhulu athambekele ekuwandiseni izimakethe zabo zokuthengisa. Ukuze wenze lokhu, qala ukukhiqiza izimpahla ezingaphezulu kunokuba umthengi adinga ngempela. Intengo yezimpahla iyancishiswa, futhi ukukhokhela ukulahleka, umkhiqizi uqala ukuzama ubuchwepheshe, ukunciphisa izindleko, ubuke izinto ezibonakalayo ezingabizi futhi izingxenye. Ukufuna ukukhuphuka, nokuzithemba komthengi kunqabile. Kukhona kakade umphumela womphakathi omubi. Kodwa umbuzo awupheli ngabathengi nabakhiqizi.
Ngethameli zokuxhumana, amaphrojekthi ahlangene nokutshalwa kwezimali, ibhizinisi linethonya elikhulu emkhakheni wezenhlalakahle. Isiko lentsha, umbono wezwe, izindinganiso ezibalulekile ziyashintsha . Inqubomgomo ivumelana nezimo ezikhona. Yonke ucwaningo lwesayensi olukhulu nentuthuko ixhaswa yizinkampani ezizimele futhi iphoqelelwe ukuba iqhubeke ngokuqondile esiqondisweni esibekiwe. Umphumela womphakathi unqunywa ngesilinganiso sokungenelela kwezamabhizinisi empilweni yomphakathi.
Imiphumela yomphakathi yomsebenzi wezomnotho ngesikhathi
Ngokuvamile lokhu kungenelela kuyisici, kungashadile, kodwa eminyakeni edlule ukuqoqa nokuqinisa izikhundla zayo. Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bekhompiyutha eminyakeni engaphansi kwengu-10 kuye kwashintsha kakhulu into ekhona. Iminyango yezindlela ezintsha ezintsha zokwelapha, ama-robotics, ukwakha izindiza, ukwakha i-rocket, imboni yezimoto futhi, impela imboni ye-IT ivuliwe. Ngesikhathi esifanayo, ukuhlukunyezwa okuphelele kwentsha kwaqala, izingxabano zempi, ukuhlaselwa kwe-cyber, inani lamaphesongqangi amaphekula landa. Akuwona konke okuhlobene ngqo nokufika kwamakhompiyutha, kodwa ubuchwepheshe be-elekthronikhi buye benza umphumela womphakathi onamandla, imiphumela engayiyobonakala kuphela eminyakeni eyishumi ezayo. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe njalo kuholela ekuguqulweni komkhakha wezenhlalakahle, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinguquko.
Umphumela womphakathi uwukuthi
Okokuqala, kubalulekile ukuqonda umqondo walesisimo. Izichazamazwi zezomnotho nezincwadi zezifundo zinikeza ukuhumusha okuhlukile kule ncazelo, kodwa bayavuma ukuthi umphumela womphakathi kuwumphumela womsebenzi wenkampani emkhakheni womnotho kazwelonke, obonakala ekuthambekeni kokuthuthukiswa komphakathi futhi akabolekisi ekubaleni okuqondile. Lebhizinisi ngezenzo zalo noma ukungenzi lutho kushintshe imvelo yomphakathi, futhi lezi zinguquko zingabonakala kalula, kokubili okuhle nokubi.
Izikhathi ezinomphumela womphakathi
Abanye abacwaningi bakholelwa ukuthi umphumela womphakathi ungumphumela wangaphandle - ukusabela komphakathi okubonakalayo ekushintsheni kwimvelo yangaphakathi yokusebenza kwebhizinisi. Kungabonakaliswa ngendlela enhle:
Ukusuka emisebenzini yamabhuku emisebenzi;
Ukunciphisa isikhathi somsebenzi;
Ukukhula kwesakhi sokudala ekudalweni kwezimpahla namasevisi nokukhuthazwa kwabo;
Ukwandisa izinga lokuphila lokusebenza komuntu onamandla;
Intshisekelo eyengeziwe ekuvikelweni kwemvelo;
Indlela yokuphila enempilo kanye nesimo sengqondo sokucophelela umzimba kanye nezidingo zayo;
Ezihlukahlukene zokuzijabulisa nolwazi lwamasiko.
Izikhathi ezimbi zokusebenza komphakathi
Ngokuphambene, kufanelekile ukukhuluma ngezici ezibonakalayo ezimbi:
Ukuxuba nokufaniswa kwezitshalo;
Ukwehlukaniswa kwemali nokwehlukaniswa kwamathementi womphakathi: umehluko phakathi kwendlela yokuphila kwabacebile nabampofu iba khona ngokwengeziwe;
Asikho isidingo sokunamathela kumasiko nezindlela zokuziphatha zomphakathi;
Indima ekhulayo yesikweletu - ukuphakanyiswa kokuphila "esikweletini";
Ukuguqulwa kwamanani nemigomo;
Ukukhula kokuthandwa kwemibono yebhizinisi: ukuhlala kuwukudla.
Indlela yokuhlonza izinguquko zekhadikhadi emphakathini?
Umnotho wezimakethe kancane kodwa ngokuqinisekile uyangcolisa umkhakha wezenhlalakahle, uphoqe ukuba ucabange ngemigomo kanye nezigaba zawo. Emibhalweni yezibalo, ungabona ukukhula komkhiqizo owenziwe ekhaya, imali engenayo kazwelonke , imali engenayo yamanye amazwe , kodwa umphumela wangempela womphakathi yilokho ngokuvamile okuhlala emacaleni embiko wonyaka. Kamuva, izazi-mlando zizothatha ukuhlaziya le nkathi yesikhathi, uphawu lokuqala, umphumela kanye nokuthuthukiswa kwemiphumela. Futhi lapha futhi manje udinga ukwaneliswa ngezibalo ezomile.
Izinkampani ezidumile emhlabeni kanye nabadlali bezimakethe ezinkulu zasemakhaya baqaphela ukuhlonishwa kwabo futhi bafuna ukuziphakamisa emphakathini. Ukuzibandakanya emisebenzini ewusizo emphakathini, ukuxazulula izinkinga ezinkulu zemvelo nezenhlalakahle, benza izibalo ezifanayo zokukhula noma ukuwohloka kwesimo esimweni somphakathi.
Izinkomba ezilinganisiwe zomphumela womphakathi
Nciphisa noma ukwandise izinga lokungasebenzi kwabantwini. Kukhona umphumela wezenhlalo womphakathi wephrojekthi, isibonelo silula: i-factory-forming evaliwe, amakhulu abantu ashiywe ngaphandle komsebenzi kanye nendlela yokudla, isibonakaliso sehlile. Esikhundleni sefektri endala yakhiwe entsha - isibalo sikhula futhi.
Ukuthuthukisa ikhwalithi yemvelo. Kulesi simo, umphumela wezomnotho usho umphumela womphakathi. Ngokomnotho, lo mbonakaliso uboniswa ekwandiseni izindleko zenkampani zemisebenzi yemvelo, ukuthengwa kwemishini emisha yokujikeleza okuvaliwe nokukhokhwa kwemali yezemvelo.
Ukufinyelela izinzuzo zomphakathi nokuzijabulisa. Ngokuphathelene nokwandisa inani lamakholomu, izindawo zokudla, ama-cinema, ama-beauty salons, ama-nightclub, izitolo ezikhethekile kakhulu, izakhiwo zokuzijabulisa, njll. Okunye okunye okumele kube khona "izikhungo" ukukhula kwengxenye yemali engenayo abantu abachitha ekuzijabuliseni nasezimbonini zasemakhaya. Ngokuvamile lezi zikhombisi zibalwa ndawonye.
Ukukhula kwabampofu kunabantu abaningi abanemiholo ehlala njalo. Kulula ukubala emibhalweni ephelele nephesenti. Futhi isebenza njengesibonakaliso somphumela omubi womphakathi. Lapho leli zwe likhula ngokungasebenzi, futhi ngakolunye uhlangothi - landisa inhloko yezingxenye ezicebile zomphakathi, kunokungalingani kwezomnotho. Imali iyancipha, imisebenzi iyancipha. Emalini eqoqiwe isisebenzi asikwazi ukuthola lokho akufunayo, futhi isimo sakhe senhlalo siwa. Umthamo uhamba, ukuhlukunyezwa komphakathi kukhula, intuthuko yezenhlalakahle ithola ukuphenduka okusha.
Ungakwazi futhi ukubala izinkomba ezifana ne-GDP, i-GNI, ibhalansi yokubuyiswa kwamanye amazwe kanye nezinye izinkomba ze-macroeconomic, kodwa azisebenzi neze ekunqumeni umphumela womphakathi, ngoba zithatha isilinganiso sezomnotho, hhayi ezenhlalo, izinzuzo.
Ukubonakaliswa komhlaba jikelele
Ukushintsha komgomo wezomnotho webhizinisi elikhulu akuthinti nje kuphela ukufunwa kwezimpahla zayo, kodwa futhi nabaphakeli abavela kwezinye izimboni, ukushintshashintsha emakethe yomsebenzi, imizwa yomphakathi, imfashini, kanye nenqubo yezombusazwe yesifunda.
Umphumela womphakathi wephrojekthi kazwelonke, njengokwakhiwa kwe- cosmodrome ye- Baikonur, wanikezela amathuba okuthuthukiswa kwendawo yonke futhi wenza izichibiyelo eziphawulekayo kulolu hlelo lwezepolitiki. Ukwakhiwa nokuhlolwa kokuqala kwe-cosmodrome kwanikeza imisebenzi emisha, ukuthuthukisa ekuthuthukisweni kwe-rocketry yesikhala sobuchwepheshe, kodwa kwakukhona nezingqinamba zenhlalakahle kanye nokuhlolwa okuphezulu kwephrofayela.
Indlela yokuhlola: incazelo, ukungalungi nezinzuzo
Iyini indlela? Indlela: Incazelo
Izindlela ezibaluleke kakhulu zocwaningo lwesayensi
I-Felinology: yilokho isayensi
Iphuzu lokuxubha le-Copper
Galega officinalis: incazelo, isicelo, Izimo, zokupheka
Izimpawu, izimbangela kanye nokwelashwa thrombophlebitis yezingalo nemilenze aphansi
Car Uhlolojikelele Omkhulu Wall H3
Impucuko 5: fashion umdlalo
Chaika kuyona (Bulgaria / Sunny Beach) - izithombe, amanani, kanye nokubuyekeza zezivakashi ezivela eRussia
Sedge - utshani ezikhulayo yonke indawo
Umthandazo St Panteleimon angawokuphulukisa nomphefumulo nomzimba
Ukulungisa we indle. Ukulungisa of amapayipi amapayipi
Oxygen Cocktail ingane: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka, ukubuyekezwa, izincomo kanye contraindications
Ngabe ingubo engcono yokuthenga ebusika wena nomntanakho